Al Shabaab Oo Sheegatay Mas’uuliyadda Qarax Ka Dhacay Duleedka Balcad.
Uhuru Kenyatta: “Heshiiska Uu Farmaajo La Galay Abeey Wuxuu Noo Yahay Fursad Weyn”
Hanka Abeey Ee Qabsashada Xamar Iyo U Heellanaanta Farmaajo. (Maqaal) Qore Eng: Cali Xaaji.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaara badan dhaliyay oo maanta ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe ee duleedka Muqdisho. Wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in qarax miino lagu gubay gaari Cabdi bile ah oo uu lasocday sarkaal katirsan ciidanka Melleteriga Dowladda Federaalka iyo ciidamo ilaal […]
Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay heshiiskii Itoobiya lagu siiyay Dekedaha Soomaaliya ee dhex maray madaxweynaha DF, Farmaajo, iyo ra’iisulwasaaraha Itoobiya, Abeey Axmed. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay kulan uu Madaxtooyadiisa kula qaatay wasiirada ugu muhiimsan dowladdiisa, kulankan oo ay saxaafadda […]
Wararka naga soo gaaraya degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe ayaa waxay sheegayaan in dabley hubaysani ay mar qura dileen shan qof oo isku qoys ahaa, iyadoo arrintan ay walwal ku beertay bulshada magaalada iyo tuulooyinka ku dhow. Weerarkan oo ka dhacay degaanka Boos Dacaar, oo ku yaalla duleedka Warsheekh, ayaa […]
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abeey, ma ahan nin ku cusub nidaamka dalkiisa, mana ahan nib dibadda laga keenay oo ay dowlado shisheeye soo korsadeen, balse waxaa soo barbaarsaday qowmiyadda Tigreega oo ay ka dhalatay hooyadii oo Kiristan ah. Dhanka diinta marka la qeexo Abeey, waa “Baqal” ama waa sida Obama oo kale, […]
Dhaq dhaqaaqa islaamiga ah ee Taliban Pakistan ayaa ku dhawaaqay in uu yeeshay hoggaan cusub kadib markii duqeyn lagu dilay amiirkii guud ee jamaacada. War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban Pakistan ayaa lagu xaqiijiyay istish-haadka amiirkii jamaacada almulla fadlullaah kadib duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee drone-ka […]
Vedio: Abeey oo Sheegay Iney Muqdisho Furanayaan Dadkooduna Ka Shaqeysanayaan.
Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa (Warkii hore war soo dhaaf) haddii niman siyaasiyiin isku sheegaya oo Xabashida ku daaban ay maalmahan marin habaabinayeen hadalkii ra’iisulwasaaraha Itoobiya ee ahaa in dalkiisa iyo Soomaaliya hal dowlad noqonayaan, ayaa waxaa soo baxay war sida qorraxda u cad oo aan sacabada lagu qarin karin, kana […]
Wararka ka imaanaya wadanka Zimbabwe ee dhaca Koonfurta qaaradda Afrika ayaa sheegaya in uu isku day dil ka badbaaday madaxweynaha cusub ee wadankaasi. Warbaahinta Afka Dowladda ku hadasha ayaa sheegtay in Emmerson Mnangagwa madaxweynaha Zimbabwe uu lakulmay weerar qarax xilli uu khudbad ka jeedinayay garoonka kubadda Cagta Bulawayo. Video kooban […]
Yaa Ilaalo U Noqonaya Madaxtooyada Afar Bilood Kadib Weerarkii Lala Beegsaday? (Sawirr+Warbixin)
Muddo afar bilood ah ayaa laga joogaa markii ay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, laba weerar oo Mataano ah ku qaaday xarunta Madaxtooyada iyo xarunta Nabad Sugidda, ee KM 0, Muqdisho. February 24, 2018, waxaa mar qura weeraro toos ah iyo qaraxyo lala beegsaday labadaasi xarumood iyadoo si gaar ah loo beegsanayay […]
Abeey oo Baarlamaanka Iyo Wasiiradiisa Ugu Faanay Inuu Guul Weyn Ka Keenay Soomaaliya.
Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya Abeey Axmad, oo saacadihii lasoo dhaafay kulan xasaasi ah la qaatay labada gole ee Baarlamaanka iyo Wasiirada ayaa ka bannaanka soo dhigay xog badan oo ku saabsan heshiiskii uu la galay Farmaajo, madaxweynaha DF. Marka ugu horreysa wuxuu ka shaafiyay eedo ay qabeen oo ah inuu la […]
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed Oo ka badbaaday Isku day dil.
Caasimadda wadanka Itoobiya magaalada Adis-Ababa waxaa laga soo sheegayaa in qarax xoogan uu ka dhacay goob uu ku sugnaa Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed, islamarkaana ay ku banaanbaxayeen taageeriyaashiisa. Qaraxa oo sida muuqata ah bambaanooyinka gacan ku sameyska ah ayaa dhacay xilli uu Ra’iisul wasaaruhu daawanayay Taageeriyaashiisa, goobtana ay ka […]